Baby – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန် ၊——— အန်တယ်ဆိုတာ အစာအိမ်ထဲက အရာတွေကို အားနဲ့ တွန်းကန်ထုတ်တာဖြစ်ပြီး အခြေအနေအကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့အသက်အရွယ်၊ တွဲဖက်ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေနဲ့ ဆေးပညာတွေ့ရှိချက်တွေဟာ အန်စေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေပဲ...
———၊ ဇွန် ၊——— ညဉ့်လယ်လောက်မှာ သင့်ကလေးငယ်ဟာ အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် ကြောက်လန့်တကြား လန့်နိုးလာပြီး ငိုကြွေးနေပါသလား။ ဒါဟာ အိမ်တွင်းစိတ်ခံစားမှု ထိခိုက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းနေကလေးဆိုရင် ကျောင်းမှာ စိတ်ထိခိုက်စရာ အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိပ်စက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (NSF)...
သင့်ကလေး သွားကျန်းမာရေး အလေးပေး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်ကလေးတွေကို သွားကျန်းမာရေး ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ပြထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို ့ကလေးတွေဟာ အသက်ခုနစ်နှစ်-ရှစ်နှစ်အရွယ်အထိ သွားကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ဆိုတာ မသိတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေးရဲ့သွားကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သန်စွမ်းစေဖို့ ရိုးစင်းတဲ့...
လသားကလေး ခြေထောက်မပြင်ရင် ခွင်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q.လသားကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တချို့အယူအဆတွေကြားနေရတာ မှန်-မမှန် သေချာမသိရတာမို့ မေးပါရစေရှင့်။ ကျွန်မကလေးက ခုဆို ၂ လနဲ့ ၉ ရက်သားပါရှင်။ ခြေထောင်ကိုပြင်ခိုင်းကြပါတယ်။ မပြင်ရင် ခွင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဖြေပေးပါရှင်။ ကလေးခြေထောက်ကို...
နို့တိုက်မိခင်စားတဲ့ အစာက ကလေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသလား
——–၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ဆရာခင်ဗျာ။ မိခင်စားသော အစားအစာမှ နို့စို့နေသော ကလေးငယ်ကို Effect ဖြစ်စေပါသလား ဆရာ။ ဥပမာ- မိခင်က မျှစ်-မျှစ်ချဉ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဒညင်းသီးစားလို့ ကလေးကို နေမကောင်းတာ တစ်ခုခုဖြစ်စေတာမျိုး၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာမျိုး။ မိခင်က...
———၊ ကိုထက် ၊——— ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားကို စကားပြောပေးခြင်း၊ သီချင်းဆိုပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေက ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်မှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ ရှိစဉ်ကတည်းက ကလေးငယ်တွေဟာ မကြာခဏကြားဖူးတဲ့ စကားလုံးတွေကို မှတ်မိနေကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ ဘဝအစောပိုင်းအဆင့်မှာ...
မိခင်နို့ထွက်ဖို့ . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးမွေးတာနဲ့ မိခင်နို့မထွက်မှာစိုးလို့ပါ။ မိခင်နို့ထွက်အောင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ A. ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း စွပ်ပြုတ်ရည်ကို တစ်နေ့ခြောက်ခွက်လောက် သောက်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီး ၁၀ဝ မှာ ၉၀ ဦးလောက်က မိခင်နို့ထွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
တစ်နှစ်ကျော်အရွယ် နွားနို့တိုက်လို့ရလား …
———၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊———- Q. သမီးလေးက တစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ မိခင်နို့ကို ပြည့်ပြည့်ဝ၀မတိုက်ခဲ့ရပါဘူး။ ထမင်းလည်း သိပ်မစားပါဘူး။ အခု နွားနို့တိုက်လို့ရပါပြီလား။ A. တစ်နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် နွားနို့တိုက်လို့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး နွားနို့ ၅၀ဝ CC တိုက်လို့ရပါတယ်။...